कोरोना भाइरसबाट विश्वभरमा १८९०७ को मृत्यु (अपडेट)
२०७६ चैत, १२
चैत १२, जेनेभा । विश्वभरि महामारीका रुपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मंगलवारसम्म विश्वका विभिन्न देशमा गरी १८ हजार ९०७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लुएचओ) ले सार्वजनिक गरेकोे विवरणअनुसार संसारभरि ४ लाख २२ हजार ८२९ जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् ।
संक्रमित व्यक्तिहरुमा १ लाख ९ हजार १०२ जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने २ लाख ९४ हजार ८२० व्यक्ति हाल उपचारारत छन् । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को संक्रमण हालसम्म १९२ देशमा देखा परिसकेको छ ।
चीनको हुपेई प्रान्तको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोभिड–१९ लाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘विश्वव्यापी महामारी’को संज्ञा दिएको छ । सोही बमोजिम नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वका सबै देशका नागरिकलाई आग्रह गरिरहेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट चीनमा ३ हजार २८१ जनाको मृत्यु भएको छ भने । त्यहाँ ८१ हजार २१८ जना संक्रमित रहेका छन् । चीनबाट बुधवार प्राप्त एक समाचारअनुसार ७३ हजार ६५० व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
हाल कोरोना भाइरसका कारण अत्यन्त प्रभावित इटालीमा यस रोगको सङ्क्रमणका कारण ६ हजार ८२० जनाको मृत्यु भएको छ । हाल ६९ हजार १७६ जना संक्रमित रहेका छन् । ८ हजार ३२६ व्यक्ति उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारण स्पेनमा २ हजार ९९१ जनाको मृत्यु भएको छ । हाल ४२ हजार ५८ जना सङक्रमित रहेका छन् । मंगलवार प्राप्त एक समाचारका अनुसार ३ हजार ७९४ व्यक्ति उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
फ्रान्समा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण १ हजार १०० जनाको मृत्यु भएको छ । प्राप्त एक समाचारअनुसार २२ हजार ३०४ सङ्क्रमित रहेका छन् भने ३ हजार २८१ उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण १२६ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । ९ हजार १३७ सङ्क्रमित भएका छन् ।
स्विट्जरल्याण्डमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण १२२ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । ९ हजार ८७७ सङ्क्रमित भएका छन् । यसैबीच १३१ जना भने उपचारपछि घर फर्किएका छन् ।
बेलायतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण ४२२ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । ८ हजार ७७ सङ्क्रमित भएका छन् । यसैबीच १३५ जना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
नेडरल्याण्डमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण २७६ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । ५ हजार ५६० सङ्क्रमित भएका छन् । यसैबीच २ जना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
अष्ट्रियामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण २८ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । ५हजार २८३ सङ्क्रमित भएका छन् । यसैबीच ९ जना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
बेल्जियममा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण १२२ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । ४ हजार २५९ सङ्क्रमित भएका छन् । यसैबीच ४६१ जना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
नर्वेमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण १२ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । २ हजार ८६६ सङ्क्रमित भएका छन् । यसैबीच ६ जना भने उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण अष्ट्रेलियामा ८, ब्राजिलमा ४६, स्वेडेनमा ४०, पोर्चुगलमा ३३, क्यानाडामा २६ , डेनमार्कमा ३२, मलेशियामा १६, आयरल्याण्डमा ७, पोल्याण्डमा १०, ग्रीसमा २०, इन्डोनेसियामा ५५, फिलिपिन्समा ३५, हङकङमा ४, इराकमा २७, अल्जेरियामा १९ , भारतमा ११, पाकिस्तानमा ६, थाईल्याण्डमा ४, सिंगापुरमा २, रुसमा १, पेरुमा ७, मेक्सिकोमा ४, इजिप्टमा २०, पानामामा ६, अर्जेन्टिनामा ६, लेबनानमा ४, संयुक्त अरव इमिरेट्समा २, ताइवानमा २, सानमारिनोमा २१, हंगेरीमा ९, मोरक्कोमा ५, अफगानिस्तानमा १, नाइजेरियामा १, बंगलादेशमा ४, घानामा २, सुडानमा १ व्यक्तिको मृत्यु भएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
बुधबवरसम्म सङ्क्रमित मात्र देशहरुका नेपाल, म्यानमार काजाकिस्तान, कङ्गो भ्याटिकन सिटी, चाड, भुटान, लिबिया, सिरिया, पपुवा न्यु गिनी, अङ्गोला, बेनिन आदि रहेका छन् । रासस / एपी / सिन्ह्वा/ एएफपी
शुक्रवारसम्म कोरोनाबाट मर्नेको संख्या ५३ हजार नाघ्यो, १० लाख १६ हजार संक्रमित[२०७६ चैत, २०]
लोकप्रियता बढेसँगै जूममाथि कडाइ[२०७६ चैत, १९]
भारतीय प्रधानमन्त्रीको आह्वान : संक्रमण परीक्षण र पहिचानमा जोड दिऔं [२०७६ चैत, १९]
उत्तर कोरियामा छैन कोरोना भाइरस ![२०७६ चैत, १९]
सर्‍यो जलवायु सम्मेलन[२०७६ चैत, १९]
कोरोना कोषमा कुन बैंकले कति रकम जम्मा गरे ?
जनकपुरधाममा कोरोना भाइरसको परीक्षण शुरू